Aiza ny riandranon'i Iguazu no hita tsara indrindra: any Brezila sa i Arzantina? | Vaovao momba ny dia
Aiza no misy ny Riandranon'i Iguazu tsara indrindra: any Brezila sa i Arzantina?
Maria | | Arzantina, Brasil
Ny valan-javaboary Iguazú dia iray amin'ireo zava-mahatalanjona voajanahary hitantsika tany Amerika Latina. Hatramin'izay dia neken'ny UNESCO tamin'ny 1986 ho zava-dehibe manerantany ary iray amin'ireo fahagagana natoraly fito eto an-tany.
Ny mampiavaka azy dia tsy mitoetra fotsiny amin'ny fisian'ny karazam-biby maherin'ny 480 sy karazan-javamaniry maherin'ny 2000 no monina ao, fa izy io koa no toeram-pialofana ho an'ny santionan'ny ala Paranaense (ampahany amin'ny Ala Atlantika), iray ny tontolo iainana manambana indrindra eto an-tany. planeta ary itoeran'ny iray amin'ireo rafi-riandrano lehibe sy mahavariana indrindra izay mahasarika mpizahatany an'arivony isan-taona. Inona koa, Ny Valan-javaboary Iguazú dia toy ny sisintany voajanahary eo anelanelan'i Brezila sy Arzantina, ka azo tsidihina avy amin'ny firenena roa.
Ankehitriny, firenena iza no manolotra traikefa tsara indrindra amin'ny valan-javaboary Iguazú? Ity fanontaniana ity dia mety apetrak'ireo mpandeha rehetra izay te-hitsidika ny riandranon'i Iguazu malaza.
4 Vidiny tapakila
5 Ahoana ny fomba hahatongavana amin'ny Riandranon'i Iguazu
Ireo mpizaha tany tonga any Foz do Iguaçu dia mikendry ny hahafantatra ny riandranon'i Iguazu aloha. Na izany aza, manana toerana fizahan-tany hafa ity tanàna ity na dia tsy misy afaka mampitaha azy ireo aza.
Ny ilan'ny Breziliana dia 20% monja amin'ireo riandrano ao amin'ny Valan-javaboary iray manontolo. Ny 80% ambiny dia mijanona ao amin'ny faritr'i Arzantina, saingy io zava-misy io dia tsy mampihemotra ny zavatra niainany tamin'ny fahalalana an'i Iguazú avy any Brezila, satria Eo amin'ny lafiny Rio de Janeiro izay ahafahanao maka sary an-tsaina tsara an'io fahitana mahafinaritra io rehefa miatrika ireo riandrano.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny boaty fanomezam-boninahitra mahita ny Riandranon'i Iguazu dia any Brezila. Eto ianao dia afaka maka ireo sary manaitra manaitra mampientam-po hanehoana ny namanao sy ny fianakavianao. Ny fizaran-tanety izay mamela refy mandinika manodidina ny 1.200 metatra, misy fiakarana sy fidinana izay manasa ny mpitsidika hitety ny habakabaka iray manontolo mba tsy hanadino na inona na inona. Manakaiky ny faran'ny fitsidihana dia azonao atao ny mankasitraka ny halehiben'ny rano sy ny heriny rehetra rehefa latsaka ao amin'ny Throat an'ny Devoly malaza ianao.
Raha fintinina, avy any Brezila ianao dia mankafy ny fianjeran'i Iguazú amin'ny hatsarany rehetra toy ny hoe mieritreritra karatra paositera ianao ary mahafinaritra ny fomba fijery avy amin'ny lalantsara akaikin'ny Throat an'ny Devoly. Ho fanampin'izany, avy amin'ny lafiny Breziliana dia misy ny fahafahana mankafy ny fahalehibiazan'ireo riandrano amin'ny alàlan'ny ascenseur misy fitaratra fitaratra.
Avy amin'ny lafin'ny Arzantina dia afaka miditra amin'ny valan-javaboahary Iguazú ianao mamaky ny tanànan'ny Puerto Iguazú, izay voaomana tsara kokoa amin'ny fizahan-tany noho i Foz do Iguaçu.
Araka ny nomarihiko teo aloha, Ny fomba fijery tsara indrindra amin'ny riandranon'i Iguazú dia avy any Brezila fa ny Arzantina dia manana 80% ny riandrano ary afaka mirehareha fa eo anilany dia tsy hita ilay riandrano fa tena tsapa., satria avy any amin'ny lafiny Arzantina no ahitanao azy ireo hianjera eo akaikinao. Akaiky kokoa ny riandrano ary tsapanao ny firohondrohon'ny rano latsaka any amin'ny banga sy ny hery ihetsehany.
Amin'ny lafiny Arzantina, ny fizahan-tany dia hahita làlan-tongotra ihany koa izay mitarika ny fahitana ny riandranon'i Iguazú avy any ambony, avy any ambany ary miampita ny renirano Iguazú aza mba hisaintsainana amin'ny fomba maloto ilay Throat Devoly manafika izay eo amin'ny lafiny Breziliana. . Misy fiaran-dalamby kely manao io dia io fa ny traikefa no mafimafy kokoa raha mandeha an-tongotra ianao.
Raha fintinina, avy any Arzantina dia tsapanao ny herin'ny riandrano rehefa mandeha eo akaikin'izy ireo ianao. Miampita ny renirano koa ianao ary mahita biby miavaka toy ny coatis aza.
Amin'ny lafiny iza avy no misy ny Riandranon'i Iguazu? Ity fanontaniana ity dia manana valiny sarotra. Miankina amin'ny zavatra tadiavintsika io rehefa tonga ao amin'ny Valan-javaboahary Iguazú isika: raha te-handinika ny lavo amin'ny fomba lehibe toy ny amin'ny karatra paositra izahay, ny tsara indrindra dia i Brezila. Ankehitriny, raha te-hihontsona eo akaikin'ny riandrano isika, ny tsara indrindra dia i Arzantina.
Amin'izao zava-misy izao, Marihina fa raha miaina traikefa feno ao amin'ny Riandranon'i Iguazú, ny zavatra mety indrindra dia ny mankany amin'ny andaniny roa amin'ny sisintany ary mankafy ny tombony azon'ny firenena tsirairay avy. Mifameno ny roa tonta ary ny mpandeha no hahazo ny valisoa.
Raha nanapa-kevitra ny hitsidika ny riandranon'i Iguazu ianao avy amin'ny toerana roa ary amin'ny andro iray dia tsara kokoa ny manomboka amin'ny lafiny Breziliana satria roa ora fotsiny ny fitsidihana ary mamela anao handany fotoana bebe kokoa amin'ny lafiny Arzantina izay ento adiny efatra izahay.
Puerto Iguazú: lafiny Arzantina 170 pesos isan'olona (20 usd, 17 €)
Foz do Iguaçu: lafiny Breziliana 50 Reais isan'olona (25 usd, 20 €)
Ahoana ny fomba hahatongavana amin'ny Riandranon'i Iguazu
Avy any Foz de Iguaçu: misy bus fitateram-bahoaka izay mitondra anao, miala isaky ny antsasak'adiny ary manodidina ny 4 reais ny vidiny, izany hoe 1.5 € na 2 usd. Sahabo ho antsasak'adiny vao tonga any ary io no fijanonana farany ka mora be.
Avy any Puerto Iguazú: Miala isaky ny 30 minitra mankamin'ny valan-javaboary ny bus, izay 40 minitra eo ho eo ny halavany; eo amin'ny 15 Arzantina ny vidiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Arzantina » Aiza no misy ny Riandranon'i Iguazu tsara indrindra: any Brezila sa i Arzantina?
Inona ny fizahantany fihazana?